နောက်ထပ် ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်မလား နောကျထပျ ကမ်ဘာစဈဖွဈမလား – Federal Journal
နောက်ထပ် ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်မလား နောကျထပျ ကမ်ဘာစဈဖွဈမလား
ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးကြီးက နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကို ရုပ်သိမ်းလှန်ချနေလာနှင့်ခဲ့ပေပြီ။ ထိုကနေစစ်ရေး တွေဆီ တဖန်လှည့်ထွက်သက်ရောက်လာခြင်းဆိုသည်မျိုးကို တွေ့လာရဖို့ကတော့ ဆက်ကြည့်မြင်ရန် ကျန်ရှိနေ ပါသေးသည်။
တိုင်းတာချက်အများအပြားအရ ၂၀၂၀ ခုနှစ် သည် လူသားတို့ရင်ဆိုင်လာရသော ဆယ်စုနှစ်များစွာ အတွင်း အဆိုးဝါးဆုံးနှစ်တစ်နှစ်အဖြစ် သမိုင်းဝင်လာဖို့ တွေ့ရှိနေရသည်။ ယနေ့ကမ္ဘာက ကပ်ဘေးအလယ် ခေါင်တည့်တည့်ရောက်နေပြီး ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလလယ် အထိ လူ ၇၂ သန်းခွဲကျော် ကူးစက်ခံခဲ့ရသည့်အနက် ၁ သန်း ၆ သိန်းကျော် သေဆုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။ ကပ်ရောဂါကာလအဆုံးမသပ်ခင် နောက်ထပ် သန်းပေါင်းများစွာ ကူးစက်ခံကြရဖို့လည်း သေချာ သလောက်ဖြစ်နေ၏။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဇောက်ထိုးကျနေပြီး အလုပ် လက်မဲ့နှုန်းကလည်း ပြဇာတ်ဆန်ဆန်ကြီး မြင့်တက် လာနေသည်။ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ထွက်နှုန်းကလည်း ခဲသီးဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီး ဤကာလ အဆုံးသပ်ချိန် အရောက်၌လည်း မျှော်လင့်စရာက သိပ်မများလှပေ။ နှံကျိုင်းကောင်မျိုးစိတ် ပလိပ်ကပ်ရောဂါက အာဖရိက မှာ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ခေါင်းထောင်ထိုးနှက်သည်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်းတုန်းကလည်း လူသတ် နကျယ်၊ ပဆုပ်ပနီတွေ ယူအက်စ်၏လူနေထူထပ်ရာ ဒေသများမှာ ]ကျ}ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အမေရိကန် တွေဆီမှာကတော့ အကြံပေးတွေ၏ သိပ္ပံနည်းကျကျ လက်တွေ့ကျအကြံÓဏ်များကိုပစ်ပယ်ပြီး သေချင်စော် နံလောက်စေသည့် ဆေးညွှန်းတွေညွှန်ပြတတ်လေ့ ရှိသော တလွဲဆံပင်ကောင်း၊ ခေါင်းကြောမာလှသူ သမ္မတတစ်ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုထိုသော အထက်ပါ ကိစ္စရပ် အကြောင်းခြင်းရာများ နက်ဖြန်သဘက် မျက်လှည့်ဆန်ဆန် ကွယ်ပျောက်သွားမည်ဖြစ်စေ၊ မပျောက်မည်ဖြစ်စေ၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ကာလ ရှည် အန္တရာယ်ကြီးကိုတော့ ဆက်လက် ရင်ဆိုင်နေကြ ရဦးပေမည်။
ပေးထားချက်အရှိအားလုံးအရ ဘာတွေ ထပ် ဆိုးရွားလာစေနိုင်မည်လဲ…။ ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ရပ်က တော့ ]စစ်ပွဲ}ပင်။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဘေးနှင့် အဓိက စီးပွားရေးအကျ တိုက်ရိုက်အဆက်အစပ်တို့က အနည်း နှင့်အများဆိုသလို စစ်ကြီးဖြစ်စေမည်ဟူသော အမေး များ၊ တွက်ဆချက်များက ချိန်ခါသင့် တန်ဖိုးထိုက် လာပါ၏။ ထိုမေးခွန်းအပေါ် သမိုင်းဖြတ်သန်းချက်နှင့် သီအိုရိသဘောတရားများက ဘာတွေပြောပြနေသည် လဲ…။
အစပိုင်းတွေကိုပြန်ကြည့်ကြမည်။ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်စေ၊ စီးပွားအကျဖြစ်စေ စစ်ပွဲကိုမဖြစ်စေနိုင်ပါဟု လူတွေ သိထားကြပါ၏။ ပထမကမ္ဘာစစ်သည် ၁၉၁၈ – ၁၉၁၉ တုပ်ကွေးကပ်ရောဂါ ကမ္ဘာကို စတင်ပျံ့နှံ့စ အချိန်တွင် ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုကပ်ရောဂါက ရုရှားပြည်တွင်းစစ်၊ ရုရှား-ပိုလန်စစ်ပွဲ၊ သို့မဟုတ် အခြားအရေးကြီးပဋိပက္ခကြီးတချို့ကိုတော့ မရပ်တန့် နိုင်စေခဲ့ပေ။ တစ်ဖန် ၁၉၂၉ တွင်စတင်သော ကမ္ဘာ့ စီးပွားပျက်ကပ်ကလည်း ၁၉၃၁ ဂျပန်ကို မန်ချူးတွေ ဝင်ကျူးကျော်ခြင်းကို မကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့သည့်အပြင် ၁၉၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် ဖက်ဆစ်ဝါဒမြင့်တက် လာခဲ့မှုအပေါ် ဓာတ်ဆီလောင်းပေးသကဲ့သို့ပင် ဖြစ်စေခဲ့သည်။ နောက်တော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဆီ ရွေ့လျားစေလာခဲ့ပါ၏။ ဆိုတော့ကာ ကိုဗစ် ၁၉ နှင့် ဂလိုဘယ်စီးပွားအကျတို့ တွဲဆက်နေသောကာလ အတွင်း အဓိကစစ်ပွဲ(များ) မဖြစ်နိုင်ဟု ရိုးရိုးကြီးပဲ တွေးထင်ယူဆမိကြသည်ဆိုပါက ထပ်တွေးကြည့်ကြ ရပါမည်။
လက်ရှိ စစ်ပွဲ(အငယ်တွေ)ကတော့ ဆက်ရှိ နေနိုင်သည်ဆိုငြား လျော့ကျသွားဖွယ်တော့လည်း ရှိနေပြန်ပါ၏။ မက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာ အင်စတီ ကျုမှ Barry Posen ကတော့ စစ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိအထိုင်ပေါ် တွင် လက်ရှိကပ်၏သက်ရောက်မှုတို့ကို ချင့်ဆ စဉ်းစားတွက်ချက်ရာ၌ ကိုဗစ် ၁၉ သည် ငြိမ်းချမ်းရေး ကို ပိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်ဟုပင် ယုံကြည်ထားသည်။ ဘယ်ရီပိုးဆန် Barry Posen က ယခုကပ်ရောဂါသည် မေဂျာပါဝါအားလုံးကို ပြင်းထန်စွာ ဒုက္ခပေး၏၊ ဤအချက်က ကပ်ဘေးဒဏ်ခံရနည်းပါးသော နိုင်ငံ များအတွက်လည်း လက်လှမ်းတမီ အခွင့်အလမ်း ပြတင်းများ မဖန်တီးကြနိုင်ချိန်ဖြစ်၍ ゞင်းတို့အတွက် လည်း ပိုအားနည်းလာစေပြီး နစ်နာရစေသည် ဆို သော အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နေပြန်ကြောင်း တင်ပြ လျှောက်လဲ ၏။ တကယ်တမ်းမှာလည်း ဂလိုဘယ် အကျပ်က အစိုးရအားလုံးကို ゞင်းတို့၏ ကာလတို နှင့်ကာလ လတ်မျှော်မှန်းချက်များအပေါ် အဆိုးမြင်မှု ပိုများလာ နေကြစေပါ၏။ နိုင်ငံများသည် လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ လွန်ကဲသော ယုံကြည်မှုဖြင့် မကြာခဏစစ်ပွဲဆီ ရောက် သွားတတ်ကြလေ့ရှိသောကြောင့် (ယုံကြည်မှုကို တစ်ခါတရံ နေရာ ချလွဲတတ်ခြင်းမျိုးကြောင့်) ကပ် ရောဂါဘေးဒဏ်က ထုတ်ပေးလိုက်သော အဆိုးမြင်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးဆီ ဦးလှည့်ရည်စူး သွယ်တန်းလိုက်ကြ သင့်ပါသည်။
စစ်ဖြစ်ပြီဆိုပါက နိုင်ငံတွေအနေဖြင့် သဘာဝ ကျကျပင် လူတွေ၊ စစ်သည်တွေ နီးကပ်စွာ စတင် စုစည်းကြရမြဲ ဖြစ်၏။ လေ့ကျင့်ရေးစခန်းတွေ၊ စစ်ဘက်အခြေစိုက်တပ်တွေ၊ တပ်စွဲ ရွေ့လျားဧရိယာ တွေ၊ ပင်လယ်ထဲမှာသင်္ဘောတွေ…။ ဒါတွေက ကပ်ရောဂါကာလအလယ်ခေါင်မှာ သင်မလုပ်ချင်ဆုံး အရာများပဲ ဖြစ်ပေမည်။ ယခုလိုကာလမျိုးမှာ နိုင်ငံ တွေအားလုံး ဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံအနေအထားဆီ အလိုလို ကျရောက်နေရသည်မို့ ဘယ်လိုအစိုးရပုံစံမျိုးမဆို အားလုံးအနေဖြင့် အစွမ်းရှိသမျှ ပြည်သူလူထုကို ဤကပ်ရောဂါဘေးမှ ကာကွယ်ကြရမည်ပဲဖြစ်သလို နိုင်သရွေ့ လုပ်နေကြချိန်လည်း ဖြစ်သည်။ အချက် အလက်တွေအားလုံး အတူစုကြည့်ပါက သည်လို အနေအထားမျိုးတွေကြောင့်ပင် မြင်ရတာရှင်းလင်း သည်။ ခေါင်းမာပြီးသန်စွမ်းသူ၊ စစ်ပွဲဖန်တီးလေ့ ရှိတတ်သူ ဆော်ဒီ၏ မိုဟာမက်ဘင်ဆယ်လ်မန်လို လူစားမျိုးပင်လျှင် ゞင်း၏ကြမ်းတမ်းလှပြီး မအောင်မြင် သော ယီမင်စစ်ရေးကန်ပိန်းများကို လျှော့ချရေး ပိုစိတ်ဝင်တစား လုပ်ကိုင်လာနေ၏။
ပိုးဆန် Posen က ကိုဗစ် ၁၉ သည် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေးကိုလည်း ကာလတိုမှကာလလတ်အထိ လျော့ကျစေဖွယ်ရှိသည်ဟု ထပ်ဖြည့်သည်။ စီးပွား ရေးအပြန်အလှန်အမှီသဟဲပြုရခြင်းက စစ်ကို ပါဝါပြည့် ကြားခံပေးနိုင်မည်ဟုလည်း သူကယုံကြည်ထား၏။ ကုန်သွယ်ရေးပြန်ဖွံ့ဖြိုးရန် လိုအပ်ချက်အား သတိ ပေးနေနိုင်သည်၊ သို့ငြား သတိပြုရန်မှာ ကုန်သွယ်ရေး ကိစ္စသည် လတ်တလောနှစ်များ၌ တောက်လျှောက် ရှုပ်ထွေးနေပြီး အထူးသဖြင့် ယူအက်စ်နှင့် တရုတ်ကြား ဖြစ်နေသည်ကိုတော့ ထည့်စဉ်းစားကြရမည်ဟုလည်း ထောက်ပြပါ၏။ အပြုရေချိန်တစ်ရပ်ဆီရောက် အောင် ထပ်ထပ်ညှိခြင်းကသာ တင်းမာမှုတွေကို လျှော့ချပေး နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး စစ်ဆီဦးတည်နေပြီဆိုသော အသံပလံ ရင်းမြစ်တွေကိုလည်း လျော့နည်းတိတ်ဆိတ်စေလိမ့် မည်။
ဤကြောင်းကျိုးများအရဆိုလျှင် ကပ်ရောဂါ သည် သူ့နဂိုနေအရ ငြိမ်းချမ်းရေးဆီ သွယ်တန်းရွေ့ သွားနိုင်ဖွယ် ရှိနေသည်။ သို့သော်… ပိုကျယ်ပြန့်လာ နေသော စီးပွားရေးအနေအထားများနှင့် စစ်နှင့် သဏ္ဌာန်တူ နီးကပ်လာခြင်းတို့အကြားမှ အဆက်အစပ် က ဘာတွေပါလဲ…။ အနည်းငယ်မျှသော နိုင်ငံခေါင်း ဆောင်တချို့တလေကတော့ အကျပ်အတည်းကို နှိုးဆော်ပြီး စစ်ဆီသွားနေခြင်းကပင် ရေရှည် အမျိုး သား အကျိုးစီးပွား၊ သို့မဟုတ် ゞင်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် နိုင်ငံရေးကံကြမ္မာကို အားသာချက်ရရှိနေစေသည် ဟု ယုံကြည်မှုပြင်းပျနေဆဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ သလား…။ ဤကနေ ဆင့်ပွားပြီး နက်ရှိုင်းရှည်ကြာ စီးပွားအကျတစ်ရပ်က ဂလိုဘယ်ပဋိပက္ခကို ပိုအတည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေများနေသလား…။
ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြပြီးသား စစ်သီအိုရီတစ်ရပ် ရှိပါသည်။ ]မတူကွဲပြားများမြောင်မှု}ကို ကိုင်တွယ်ပုံ ဟု ခေါ်ကြသည့် (သို့မဟုတ် ]တစ်ပါးသူအပြစ်အတွက် ဒဏ်သင့်ခံရသူ သီအိုရီ၊ Scapegoat Theory ဟုလည်း ဆိုကြသည်) သဘောတရားကို ပြဆိုဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်၏။ ပြောရလျှင် ]ဓားစာခံရှာ စစ်ပြုခြင်း}ပင်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းမှာ လူ ကြိုက်နည်းလာမှုကို စိတ်ပူလာ သောကရောက်လာသော ခေါင်းဆောင်တချို့အနေဖြင့် သူတို့၏ပျက်ယွင်းချို့တဲ့မှုများကို ဖုံးကွယ်ရန် လူထုကို တခြားအာရုံပြောင်းသွားစေဖို့ ကြိုးစားလှုံ့ဆော်ရန် ပြည်ပပါဝါတစ်ရပ်ရပ်၊ သို့မဟုတ် တစ်နိုင်ငံငံဆီ ဆန့်ကျင်စစ်ပြုနိုင်ရေးမျိုး အားထုတ်ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤလောဂျစ်မှကြည့်ဖြင်ယူပါက ယခု အမေ ရိကန်တချို့ စတင်ပူပန်လာနေကြသော စစ်ပွဲဆီများ လားဆိုသည်ကို တွေ့ရှိလာနေရပါ၏။ သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူရှုံးနိုင်ခြေကို ကာထေရန် အီရန် သို့မဟုတ် ဗင်နီဇွဲလားကို စစ်ဝင် တိုက်ရန်ကြိုးစားမည်လားဟု စိုးရိမ်လာနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
မနှစ်မြို့သော်လည်း ဤလိုထွက်ရှိချက်ကိုကပင် လူကို အတော်ရိုက်ခတ်စေပါ၏။ သီအိုရီကတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသာ ယုတ္တိနှင့် လက်တွေ့ စီးဆင်းတတ်ပုံတွေကို ဥပက္ခာပြုမည်ဆိုပါက စစ်ဖြစ် ပေါ်ကြောင်း ပြသထားသည်ပင်။ စစ်ဆိုသည်က အလောင်းအစားဆန်လှသည်။ သေးငယ်သည်ဆိုလျှင် တောင် ကိစ္စခြင်းရာတွေကို ပိုဆိုးစေ ကုန်တတ်မြဲ ဖြစ်၏။ ဒါက ထရမ့်၏ ကံကြမ္မာခေါင်းတလားကို ရိုက်ပိတ်မည့် နောက်ဆုံးသံချက်ပင် ဖြစ်သွားစေပေ မည်။ တစ်ဖန်ထပ်ကြည့်ကြရလျှင်တော့ ထရမ့်အနေ ဖြင့် လက်ရှိအမေရိကလုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေ သောနိုင်ငံဟု ထင်လောက်ဖွယ် တစ်နိုင်ငံမှမရှိ။ သို့ငြား ပြည်တွင်းမှာတော့ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလျက် အမေရိကန် ထောင်ပေါင်းများစွာ (ကပ်ရောဂါကြောင့်) သေဆုံးနေ ချိန်တွင် အီရန်နှင့် ဗင်နီဇွဲလားကိစ္စမှာ အချိန်နှင့်ငွေတွေ ဘာကြောင့် ထရမ့်အလဟဿ အကုန်ကျခံနေသည်လဲ ဆိုခြင်းအပေါ် သူ့ကိုသွေးတိတ်အောင် ဆက်ထောက်ခံ ပေးနေသူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှ ဝေ၀ါးနေကြရပြန်၏။ အောင်မြင်သော စစ်ရေးတုံ့ပြန်မှုဆိုလျှင်တောင် အမေရိကကို ပြန်အလုပ်ဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပေ။ ကမ္ဘာ အနှံ့က ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသောအစိုးရတွေ တာဝန်ခံယူ ဆောင်ရွက်နေနှင့်ကြသည့် (ရောဂါကို) စစ်ဆေး-ရှာဖွေ ထိရောက်စွာပိုလုပ်ခြင်းကသာ အဆင်ပိုပြေ သည်။ သို့မဟုတ် ကာကွယ်ဆေးဘက်ပိုလုပ်…။ သည် ယုတ္တိတူကသာ အခြားကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်း လမ်းညွှန်ပြပေးနေပုံပင်။
နောက်ထပ်ရင်းနှီးကြပြီးသားသီအိုရီက ]စစ်ရေး ဆိုင်ရာကိန်းဝါဒစနစ်}ဖြစ်သည်။ စစ်ပွဲက စီးပွား ရေးတောင်းဆိုချက် အများအပြားထွက်ပေါ်စေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ စီးပွားကျနိုင်ငံတွေကို ထိုင်းမှိုင်းအနေ အထားကနေတောင် လွတ်မြောက်ထွက်စေပြီးြွကယ်ဝမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်များပြားတိုးတက်ရရှိမှုဆီ ဦးလှည့်သွားစေတတ်ပြန်သည်။ ထင်ရှားလှသော ထောက်ပြစရာဥပမာက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပြီး အမေရိကစီးပွားရေးကို မဟာစီးပွားပျက်အကျထဲမှ ခပ်မြန်မြန် ဆွဲထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤရှုထောင့် မှကြည့်လျှင် ဂရိတ်ပါဝါတွေအနေနှင့် စစ်ပွဲဆီသွားခြင်း က လုပ်ငန်းကြီးတွေ (စစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေး ကဲ့သို့)ကို အခြေခံကျကျ မြှင့်ထိန်းခြင်း ဖြစ်နေစေ နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်သူလည်းရှိပေမည်။ စီးပွားရေး အပေါ် စိတ်မသက်မသာဖြစ်လာသော အစိုးရတွေ အနေနှင့် အသစ်ပြန်စဖို့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် စစ်ပွဲဆီစွန့်စားလိုက်မလား သောကပွားဖွယ်လည်း ဖြစ်သည်။
သံသယရှိပါသည်။ တကယ့်စစ်တစ်ခုက အရေး ပါသော လှုံ့ဆော်မှုတစ်ရပ်ကို မြှင့်ပေး၏၊ သို့ငြား ဘယ်နိုင်ငံကမဆို အဘက်ဘက်က စွန့်စားရမည့် ရှိနေချက်အားလုံးအရ ကျယ်ပြန့်သော စစ်ပွဲတစ်ရပ် စတင်နိုင်၏ ဆိုသည်ကတော့ ထိုနိုင်ငံြွေကးမြီ သိပ်ထူ နေချိန်ဆိုလျှင်တောင် ပုံဖော်စဉ်းစားရခက်ခဲပါသည်။ ပိုအရေးကြီးသည်က စီးပွားရေးလှုံ့ဆော်ရန် ပိုလွယ် ကူပြီး တိုက်ရိုက်ပိုကျသည့် အခြားနည်းလမ်းများစွာ ရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ မှာ ငွေပိုသုံး၊ အလုပ်လက်မဲ့အာမခံ… စသည်တို့လို အပြင် ]ရဟတ်ယာဉ်ပေးချေမှုများ}ကဲ့သို့ ငွေပိုစီးဆင်း လှည့်ပတ်စေမှုတွေ လုပ်နိုင်ပါ၏။ စစ်ကြေညာခြင်း ဆိုသည်က စီးပွားရေးကို လှုံ့ဆော်ဖို့လုပ်နိုင်တာတွေ ထဲမှာ ထိရောက်သေချာမှု အနည်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါ၏။ စစ်ပွဲခြိမ်းခြောက်မှုက နိုင်ငံရေးသမားတွေ စတော့ဈေးကွက်ကို မျက်စောင်းထိုးလာတာ ပိုများ စေသောကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလည်း ကောလာ ဟလတွေနှင့် သောကပွေတတ်စေသည်။
စီးပွားအကျအလှည့်များက တချို့သော အထူး သီးသန့်ခြေနေချိန်ခါများတွင်တော့ စစ်ဖြစ်စေရန် အားပေးအားမြှောက်လုပ်တတ်ပါ၏။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် ခက်ခဲကြမ်းရှမှုတွေများနေပြီး အရေးပါသော တန်ဖိုးတစ်စုံတစ်ရာကို ပြန်ဖမ်းယူဖို့ လိုအပ်လာနေပြီ ဟု ယူဆလာရချိန်မျိုးတွေမှာ ဖြစ်သည်။ ဤမိုဒယ်တွင် ၁၉၉၀ ကူဝိတ်ကိုဝင်သိမ်းဖို့ ဆက်ဒမ်ဟူစိန်၏ဆုံးဖြတ် ချက်မျိုးက အတော်ပြည့်စုံသည့် နမူနာပြယုဂ်ဖြစ်သည်။ အီရန်နှင့် ကာလရှည်စစ်ပွဲအပြီး အီရတ်၏စီးပွားရေး က ကြောက်လန့်စရာကျဆင်းနေ၏။ အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာက ဆက်ဒမ်ကိုခြိမ်းခြောက်နေသလို ကူဝိတ် ၏ ရေနြွံကယ်ဝမှုကြီးက ဆုလာဘ်အဖြစ် မျက်စောင်း ထိုးစိတ်ကူးယဉ်စရာဖြစ်နေသည်။ စော်ဘွားနိုင်ငံလေး ကို လက်နက်ဖြင့်ဝင်သိမ်းဖို့ကလည်း သိပ်ခက်မည် မဟုတ်ပြန်။ နောက်တစ်ချက်က ကူဝိတ်ကို ဆပ်စရာ အြွေကး အများအပြားတင်နေခြင်းပင်။ ဘဂ္ဂဒက်က ပုဂ္ဂိုလ်သည် ညတွင်းချင်းစာတစ်အုပ်ဖတ်သကဲ့သို့ြွေကးမြီများလည်းမဆပ်ရတော့အောင် ကြံပါတော့ သည်။ အန္တရာယ်တောထဲကျနေသော အီရတ်၏စီးပွားရေးအနေအထားက စစ်ဖြစ်စေခဲ့သည်ဟု ပြောလို့လည်း ရပါသည်။
ယနေ့ဘယ်နိုင်ငံ ဤလို အနေအထားရောက်နေ သလဲဆိုသည်ကိုတော့ စဉ်းစား၍မရသေးပါ။ ရုရှားက ယူကရိန်းကို ပိုဦးတည် လိုချင်လာနေသည်လား၊ တရုတ်က ထိုင်ဝမ်ကို စီးပွားအကျိုးပိုဖြစ်ထွန်းကြစေ မည့်အရေး ရည်မှန်းချက်ပြ မျက်စပစ် သိမ်းသွင်းနေ သည်လား… ယတိပြတ်ပြောနိုင်ကြဖို့တော့ ခက်ခဲပါ ၏။ သို့ဆိုလျှင် ထရမ့် အရိပ်အခြည်ပြပြောဖူးသော ရေနြွံကယ်ဝ တစ်နိုင်ငံငံကို (တလွဲလောဘဖြင့်) အောင်နိုင်ခြင်းဆိုသည်ကလည်း ဆွဲဆောင်မှုမရှိလှပါ။ ဈေးကွက်မှာ ငမ်းငမ်းတက်နေချိန်မဟုတ်၍ဖြစ်သည်။ ပူပင်စရာရှိသည်က အင်အားနည်းပြီး အကာအကွယ် မဲ့သော နိုင်ငံငယ်တချို့ဖြစ်သည်။ ကပ်ရောဂါကာကွယ် ဆေးထွက်ပေါ်လာလျှင် ပိုင်ဆိုင်မည့်၊ စတော့ဈေးကွက် မှာ တန်ဖိုးမြင့်သွားမည့်၊ နိုင်ငံငယ်လေးတွေအရေး ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဤရှုမြင်ချက်သည်လည်း ဝေးကွာလှပြီး မဖြစ်နိုင်ဟုပင်ဆို၍ ရပြန်သည်။
ရေရှည်အမြင်အရတော့ စီးပွားအကျ ဆက်ကြာ နေမည်ဆိုပါက စစ်ဆီရောက်သွားဖို့ရှိပါသည်။ ဖက်ဆစ် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံခြားသားမုန်းတီးရေး နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ ကိုယ်ကျိုးကာကွယ်ရေးဝါဒ နှင့် လွန်ကဲအမျိုးသားရေးဝါဒကို ဆီလောင်းအားဖြည့် ခြင်းတို့လို လုပ်ရပ်မျိုးတွေကြောင့် စစ်ဖြစ်ရန် ပိုနီးကပ် မည်။ ဒါတွေက တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံလက် ခံလောက် ဖွယ် ညှိနှိုင်းသဘောတူညီမှုတွေ ရနိုင်ဖို့ အများကြီး ပိုခက်ခဲစေမည့် ကိစ္စများပင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၃၀ ပြည့် လွန်နှစ်များ၏သမိုင်းက စီးပွားရေးအကျ သက်ရောက် ချက်များကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးတစ်လမ်းမောင်း လမ်းသေဖြစ်ကုန်စေခြင်းကာလကို ထင်ရှားပြဆို၏။ ဦးဆောင်သွားသည်က စစ်ဆီသာဖြစ်သည်။ အမျိုး သားရေးဝါဒ၊ နိုင်ငံခြားသားမုန်းတီးရေးနှင့် အသော် ရစ်တေးရီးယန်းအုပ်ချုပ်ပုံတို့က ကိုဗစ် ၁၉ မတိုင် ခင်ကလို ゞင်းတို့တစ်လှည့် ပိုအားကောင်းပြန်ရောက် လာနိုင်အောင်လုပ်နေသည်။ သို့ငြား ယခု ကမ္ဘာ့ထောင့် တိုင်းမှာ ပေါ်ပေါက်နေသော စီးပွားရေးဒုက္ခက ဤကိစ္စတွေကိုပို လမ်းကြောင်းရှင်းပေးနိုင်နေသည် သာမက ဗိုင်းရပ်စ်အပေါ်အကြောက်တရား လျော့ကျ လာကြချိန်တွင် စစ်ပွဲအောက် ကုန်းမှောက်နေကြရမည့် အနေအထားဆီ ပိုရောက်စေနိုင်နေပြန်သည်။
မျှခြေညီအပေါ်မှ သေချာစဉ်းစားလျှင်တော့ စီးပွားရေးအခြေအနေတွေ ပုံမှန်မဟုတ်ဆိုငြား ယနေ့ မျက်မြင် သက်သေပြုပြနေသော သက်ရောက်မှု များစွာ အရ စစ်ဖြစ်မည်ဟု သိပ်မမြင်မထင်ပါ။ ဘာကြောင့် ပါလဲ….။
ပထမအချက်။ ။ ဒီပရက်ရှင်က စစ်ဖြစ်စေဖို့ အားကြီးသော အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်(ခဲ့)လျှင် တောင် ဒါကို ကျော်လွန်သွားနိုင်ဖို့ကပိုများပါ၏။ ဥပမာတစ်ခုပြောမည်။ နိုင်ငံစထူထောင်စဉ် ကနေဆိုပါက ယူအက်စ်သည် ရီဆက်ရှင်ပေါင်း အကြိမ် ၄၀ ကျော် နှင့် နိုင်ငံချင်းဖြစ်စစ်ပွဲအကြိမ် ၂၀ အနည်း ဆုံး ခံစား၊ ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်။ ထိုစစ်အများစုမှာ တိုင်း ပြည်စီးပွားရေးနှင့် မပတ်သက်၊ မဆက်စပ်ပါ။ ရီဆက် ရှင်တွေကသာ စစ်ဖြစ်စေဖို့အားကြီးသော အကြောင်း ရင်းတစ်ရပ်ဆိုပါလျှင် ဘောဂဗေဒပညာရှင် ပေါလ်ဆင် မြူရယ်ဆင်၏ စတော့ဈေးကွက်ကို သောထေ့သော စကားရပ်သုံး ဟောကိန်းထုတ်ကြရပေမည်။ ] နောက် ဆုံး ၅ ကြိမ်နဲ့ ၅ ကြိမ်အောက်မှာတင် (စစ်) ၉ ခါလောက်ဖြစ်ပြီးပြီ}…။
ဒုတိယအချက် ။ ။ တိုင်းပြည်တွေအနေဖြင့် ခပ်မြန်မြန်အောင်နိုင်မည်၊ ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာမည်ဟု မယုံကြည်လျှင် စစ်ပွဲတစ်ရပ် စတင် မတိုက်ပါ။ ဂျွန်မီးယားရှိုင်းမား ( John Mearshimer ) က သူ့ ဂန္ထဝင်စာအုပ် Conventional Deterrence မှာ ယခုလို ရေးသားဖော်ပြထား၏။ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်များက ကာလကြာမည်၊ သွေးမြေကျများ မည်၊ စရိတ်စကကြီးမည်၊ မသေချာမရေရာ ဟု မြင်ပါ က စစ်မတိုက်။ စစ်ကိုရွေးချယ်ကြဖို့ရာတွင် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များကတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင် ယုံကြည် စိတ်ရှိရေးက အရင်ကျ၏။ ခပ်မြန်မြန်၊ ဈေးသက်သက် သာသာ နိုင်ရမည်၊ တိတိပပအောင်နိုင်ရမည်၊ သို့ မဟုတ် သီးခြားသတ်မှတ်ရည်မှန်းချက်တချို့ကို စရိတ် စကအကုန် အကျနည်းနည်းဖြင့် အောင်မြင်နိုင်ရမည်။ ၁၉၁၄ ဥရောပမှာ စစ်ဖြစ်ခဲ့ရာ၌ နှစ်ဖက်လုံးက မြန်မြန် နှင့်သက်တောင့်သက်သာအနိုင်ရမည်ဟု ယုံကြည် ခဲ့ကြ၏။ နာဇီဂျာမနီသည် ゞင်း၏ရန်သူများကို တတ် နိုင်သလောက် ခပ်မြန်မြန်နှင့် အကုန်အကျနည်းနည်း၊ အကျအဆုံးနည်းနည်းဖြင့် အနိုင်ယူရေး ဘလစ်ဇ် ခရိုင်းဂ် မဟာဗျူဟာကို ချမှတ်တွဲဆက်ကျင့်သုံးခဲ့၏။ အီရန်ကို ၁၉၈၀ အီရတ်ဝင်တိုက်ခဲ့သည်မှာ အစ္စလာမ္မစ် သမ္မတနိုင်ငံအီရန် ဖရိုဖရဲဖြစ်နေပြီး ခပ်လွယ်လွယ် အနိုင်ရမည် ဟု ဆက်ဒမ် ယုံကြည်သောကြောင့်ပင်။ အီရတ်ကို ၂၀ဝ၃ စစ်ပြုဝင်တိုက်ခဲ့ရာ၌လည်း ဂျော့ ဒဗယ်လျူဘုရ်ှအနေဖြင့် စစ်ကို တိုတောင်းမည်၊ အောင် မြင်မည်၊ ကုန်ကျစရိတ်က အီရတ်စရိတ်ဖြင့်သာ ငါးကြင်းဆီဖြင့် ငါးကြင်းကြော်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်မှု ကြောင့်သာ ဖြစ်၏။
ဤတွေ့ရှိရချက်က ထိုခေါင်းဆောင်တို့သည် ဆိုးရွားစွာတွက်ချက်မှုလွဲချော်စေခဲ့စေမူ အဓိက ဆုံမှတ်ပွိုင့်ကို မြင်နေရသည်ကတော့ နိုင်ငံစီးပွားရေး အနေအထားအပေါ် မထည့်သွင်းမတွက်ချက်မှု ဖြစ် သည်။ ထိုခေါင်းဆောင်တို့သာ ခပ်မြန်မြန်၊ စရိတ် ကျဉ်းကျဉ်း၊ သင့်လျော်သောအောင်မြင်နိုင်ခြေကို လွယ်လွယ်ရမည်… စသောအချက်များကို အဓိကထုား မစဉ်းစားမိခဲ့ပါက စစ်ပင်ဖြစ်ခဲ့မည်မဟုတ်ပေ။
တတိယအချက် ။ ။ အရေးအကြီးဆုံးအချက် လည်း ဖြစ်သည်။ စစ်ပွဲအများစု၏ အခြေခံတွန်းအား ကျကျ ပိုင်းဖြတ်ဆန္ဒမှာ စီးပွားရေးအသာစံရလိုမှု မဟုတ်၊ လုံခြုံရေးသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤကြောင်းကျိုး ပြချက်အရ နိုင်ငံများ အနေဖြင့်… ရေရှည်ပါဝါမျှခြေ ရွေ့သွားပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်ဆောင်လာမည်၊ ရန်ဘက် များကို ဘယ်လိုမှဆီလျော် သင့်တော် ညှိနှိုင်း၍ မရ တော့ဘဲ အန္တရာယ်အသွင်ဆောင်လာပြီ၊ ယခုဝင် ရောက် လှုပ်ရှားလိုက်ပါက အခြေအနေဆိုးများကို ပြောင်းပြန်လှည့်လိုက်နိုင်ပြီး အနေအထားတွေကို တည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရစေနိုင်မည်… ဟူ၍ ゞင်းတို့ကိုယ်တိုင် ယုံကြည်နေစေလာချိန်မျိုးများတွင် စစ်ပွဲအသံဗလံများ မြင့်တက်လာမည် ဖြစ်လေသည်။ သမိုင်းပညာရှင် အေဂျေပီတေလာ (A. J. P. Taylor) တွေ့ရှိထုတ်ဖော် ထားချက်ရှိ၏၊ ]… ဂရိတ်ပါဝါများကြားမှ (၁၈၄၈ – ၁၉၁၈ အတွင်း) စစ်ပွဲတိုင်းသည် ခုခံစစ်အဖြစ်သာ စတင်ခဲ့သည်၊ ကျူးကျော်စစ်မဟုတ်ပေ…}၊ ဤအချက် သည် ထိုအချိန်ကာလများကတည်းက စစ်ပွဲအများစု အတွက် ယခုထိ မှန်ကန်ထင်ကျန်နေသေးပါ၏ ။
အောက်ခြေမျဉ်း ။ ။ စီးပွားရေးအနေအထား (ဒီပရက်ရှင် အကျတစ်ရပ်) က စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှုများအတွင်း ပိုကျယ်ပြန့်သော နိုင်ငံရေးရပ်ဝန်းဖြစ်လာရန် သက်ရောက်နိုင်ခြေ ရှိပါ သည်။ သို့ငြား အရေးအပါဆုံး သောအချက်မဟုတ်ပေ။ အချက်များစွာထဲမှ ရှားပါးတစ်ချက်သာဖြစ်၏။ ကိုဗစ် ၁၉ က ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို ထိခိုက်နစ်နာ အနှုတ် ဆောင်စေအောင် ဆက်ကျယ်ပြန့်ကြီးထွားတည်ရှိ နေသည်ဆိုလျှင်တောင် (ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကတော့ ထိခိုက်နေတာမြင်နေရပြီးဖြစ်၏) စစ်ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ အတွက် အလွန်အမင်းကြီး မသက်ရောက်စေနိုင်ပါ၊ အထူးသဖြင့် လောလောဆယ် ကာလတိုတွင် ပိုမသက် ရောက်နိုင်ပါ။
ဒါကို သေချာစေဖို့ဆိုရာတွင်တော့ စစ်၏နောက် ထပ်အားကြီးသောအကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ကို ပြောရပါ ဦးမည်၊ ထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်၍မရနိုင်သော မိုက်မဲ ရူးသွပ်မှု…။ အထူးအားဖြင့် ယနေ့ သုံးလပတ်ကာလ များမှာ လက်တွေ့သက်သေပြဖြစ်ပေါ်နေမှုတချို့။ တလွဲလမ်းညွှန်ခေါင်းဆောင်များက နောက်ထပ် သွေးမြေကျစေမှုကြီးတွေ ဖြစ်ပေါ်စေမလား၊ မြင်တွေ့ ဖြစ်ပေါ်လာမည်မဟုတ်ဟု ယတိပြတ်ပြောနိုင်မလား၊ ထိုထိုတွေအတွက်ကတော့ မည်သူကမျှအာမခံနိုင် မည်မဟုတ်ပါ။ သမိုင်းမှာ သီးသန့်ကာလမျိုးတွေ၌ နေခြည်ဖျန်းပက် ရောင်စဉ်လက်မှုကို ရှာဖွေကြရတာ တော့ ခက်ခဲတတ်မြဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကတော့ စစ်ဖြစ် မည်မဟုတ် ဟူသောအမြင်သာ မှန်ကန်သည်ဟု မျှော် လင့် ယုံကြည်သွားနေမည်ဖြစ်သည်။
(မူရင်းဆောင်းပါးရှင် စတီဖင် အမ် ဝေါ့လ်ထ် Stephen M. Walt သည် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်၊ နိုင်ငံ တကာဆက်ဆံရေးဌာန၏ the Robert and Renee Belfer ပါမောက္ခ ဖြစ်သည်။)
WillaGlobal Depression Trigger Another World War ? by Stephen M. Walt.
– Updated news. (Mid of December 2020)
ကျောရိုနာဗိုငျးရပျဈကပျဘေးကွီးက နိုငျငံတကာစီးပှားရေးကို ရုပျသိမျးလှနျခနြလောနှငျ့ခဲ့ပပွေီ။ ထိုကနစေဈရေး တှဆေီ တဖနျလှညျ့ထှကျသကျရောကျလာခွငျးဆိုသညျမြိုးကို တှလေ့ာရဖို့ကတော့ ဆကျကွညျ့မွငျရနျ ကနျြရှိနေ ပါသေးသညျ။
တိုငျးတာခကျြအမြားအပွားအရ ၂၀၂၀ ခုနှဈ သညျ လူသားတို့ရငျဆိုငျလာရသော ဆယျစုနှဈမြားစှာ အတှငျး အဆိုးဝါးဆုံးနှဈတဈနှဈအဖွဈ သမိုငျးဝငျလာဖို့ တှရှေိ့နရေသညျ။ ယနကေ့မ်ဘာက ကပျဘေးအလယျ ခေါငျတညျ့တညျ့ရောကျနပွေီး ၂၀၂၀ ဒီဇငျဘာလလယျ အထိ လူ ၇၂ သနျးခှဲကြျော ကူးစကျခံခဲ့ရသညျ့အနကျ ၁ သနျး ၆ သိနျးကြျော သဆေုံးခဲ့ရပွီးဖွဈသညျ။ ကပျရောဂါကာလအဆုံးမသပျခငျ နောကျထပျ သနျးပေါငျးမြားစှာ ကူးစကျခံကွရဖို့လညျး သခြော သလောကျဖွဈနေ၏။ ကမ်ဘာ့စီးပှားရေးကလညျး လှတျလှတျလပျလပျ ဇောကျထိုးကနြပွေီး အလုပျ လကျမဲ့နှုနျးကလညျး ပွဇာတျဆနျဆနျကွီး မွငျ့တကျ လာနသေညျ။ ကုနျသှယျရေးနှငျ့ထှကျနှုနျးကလညျး ခဲသီးဆှဲထားသလိုဖွဈနပွေီး ဤကာလ အဆုံးသပျခြိနျ အရောကျ၌လညျး မြှျောလငျ့စရာက သိပျမမြားလှပေ။ နှံကြိုငျးကောငျမြိုးစိတျ ပလိပျကပျရောဂါက အာဖရိက မှာ ဒုတိယအကွိမျ ပွနျခေါငျးထောငျထိုးနှကျသညျ၊ အောကျတိုဘာလအတှငျးတုနျးကလညျး လူသတျ နကယျြ၊ ပဆုပျပနီတှေ ယူအကျဈ၏လူနထေူထပျရာ ဒသေမြားမှာ ]ကြ}ခဲ့ကွောငျး သိရှိရသညျ။ အမရေိကနျ တှဆေီမှာကတော့ အကွံပေးတှေ၏ သိပ်ပံနညျးကကြ လကျတှကေ့အြကွံÓဏျမြားကိုပဈပယျပွီး သခေငျြစျော နံလောကျစသေညျ့ ဆေးညှနျးတှညှေနျပွတတျလေ့ ရှိသော တလှဲဆံပငျကောငျး၊ ခေါငျးကွောမာလှသူ သမ်မတတဈဦး ရှိခဲ့ပါသညျ။ ထိုထိုသော အထကျပါ ကိစ်စရပျ အကွောငျးခွငျးရာမြား နကျဖွနျသဘကျ မကျြလှညျ့ဆနျဆနျ ကှယျပြောကျသှားမညျဖွဈစေ၊ မပြောကျမညျဖွဈစေ၊ ရာသီဥတုပွောငျးလဲမှု ကာလ ရှညျ အန်တရာယျကွီးကိုတော့ ဆကျလကျ ရငျဆိုငျနကွေ ရဦးပမေညျ။
ပေးထားခကျြအရှိအားလုံးအရ ဘာတှေ ထပျ ဆိုးရှားလာစနေိုငျမညျလဲ…။ ဖွဈနိုငျခွတေဈရပျက တော့ ]စဈပှဲ}ပငျ။ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါဘေးနှငျ့ အဓိက စီးပှားရေးအကြ တိုကျရိုကျအဆကျအစပျတို့က အနညျး နှငျ့အမြားဆိုသလို စဈကွီးဖွဈစမေညျဟူသော အမေး မြား၊ တှကျဆခကျြမြားက ခြိနျခါသငျ့ တနျဖိုးထိုကျ လာပါ၏။ ထိုမေးခှနျးအပျေါ သမိုငျးဖွတျသနျးခကျြနှငျ့ သီအိုရိသဘောတရားမြားက ဘာတှပွေောပွနသေညျ လဲ…။
အစပိုငျးတှကေိုပွနျကွညျ့ကွမညျ။ ကပျရောဂါ ဖွဈစေ၊ စီးပှားအကဖြွဈစေ စဈပှဲကိုမဖွဈစနေိုငျပါဟု လူတှေ သိထားကွပါ၏။ ပထမကမ်ဘာစဈသညျ ၁၉၁၈ – ၁၉၁၉ တုပျကှေးကပျရောဂါ ကမ်ဘာကို စတငျပြံ့နှံ့စ အခြိနျတှငျ ပွီးဆုံးခဲ့သညျ။ သို့သျော ထိုကပျရောဂါက ရုရှားပွညျတှငျးစဈ၊ ရုရှား-ပိုလနျစဈပှဲ၊ သို့မဟုတျ အခွားအရေးကွီးပဋိပက်ခကွီးတခြို့ကိုတော့ မရပျတနျ့ နိုငျစခေဲ့ပေ။ တဈဖနျ ၁၉၂၉ တှငျစတငျသော ကမ်ဘာ့ စီးပှားပကျြကပျကလညျး ၁၉၃၁ ဂပြနျကို မနျခြူးတှေ ဝငျကြူးကြျောခွငျးကို မကာကှယျပေးနိုငျခဲ့သညျ့အပွငျ ၁၉၃၀ ပွညျ့လှနျနှဈမြားတှငျ ဖကျဆဈဝါဒမွငျ့တကျ လာခဲ့မှုအပျေါ ဓာတျဆီလောငျးပေးသကဲ့သို့ပငျ ဖွဈစခေဲ့သညျ။ နောကျတော့ ဒုတိယကမ်ဘာစဈကွီးဆီ ရှလြေ့ားစလောခဲ့ပါ၏။ ဆိုတော့ကာ ကိုဗဈ ၁၉ နှငျ့ ဂလိုဘယျစီးပှားအကတြို့ တှဲဆကျနသေောကာလ အတှငျး အဓိကစဈပှဲ(မြား) မဖွဈနိုငျဟု ရိုးရိုးကွီးပဲ တှေးထငျယူဆမိကွသညျဆိုပါက ထပျတှေးကွညျ့ကွ ရပါမညျ။
လကျရှိ စဈပှဲ(အငယျတှေ)ကတော့ ဆကျရှိ နနေိုငျသညျဆိုငွား လြော့ကသြှားဖှယျတော့လညျး ရှိနပွေနျပါ၏။ မကျဆာခြူးဆကျနညျးပညာ အငျစတီ ကြုမှ Barry Posen ကတော့ စဈဖွဈဖှယျရှိအထိုငျပျေါ တှငျ လကျရှိကပျ၏သကျရောကျမှုတို့ကို ခငျြ့ဆ စဉျးစားတှကျခကျြရာ၌ ကိုဗဈ ၁၉ သညျ ငွိမျးခမျြးရေး ကို ပိုမွှငျ့တငျပေးနိုငျသညျဟုပငျ ယုံကွညျထားသညျ။ ဘယျရီပိုးဆနျ Barry Posen က ယခုကပျရောဂါသညျ မဂြောပါဝါအားလုံးကို ပွငျးထနျစှာ ဒုက်ခပေး၏၊ ဤအခကျြက ကပျဘေးဒဏျခံရနညျးပါးသော နိုငျငံ မြားအတှကျလညျး လကျလှမျးတမီ အခှငျ့အလမျး ပွတငျးမြား မဖနျတီးကွနိုငျခြိနျဖွဈ၍ ゞငျးတို့အတှကျ လညျး ပိုအားနညျးလာစပွေီး နဈနာရစသေညျ ဆို သော အဓိပ်ပာယျဖွဈနပွေနျကွောငျး တငျပွ လြှောကျလဲ ၏။ တကယျတမျးမှာလညျး ဂလိုဘယျ အကပျြက အစိုးရအားလုံးကို ゞငျးတို့၏ ကာလတို နှငျ့ကာလ လတျမြှျောမှနျးခကျြမြားအပျေါ အဆိုးမွငျမှု ပိုမြားလာ နကွေစပေါ၏။ နိုငျငံမြားသညျ လိုအပျသညျထကျပို၍ လှနျကဲသော ယုံကွညျမှုဖွငျ့ မကွာခဏစဈပှဲဆီ ရောကျ သှားတတျကွလရှေိ့သောကွောငျ့ (ယုံကွညျမှုကို တဈခါတရံ နရော ခလြှဲတတျခွငျးမြိုးကွောငျ့) ကပျ ရောဂါဘေးဒဏျက ထုတျပေးလိုကျသော အဆိုးမွငျကို ငွိမျးခမျြးရေးဆီ ဦးလှညျ့ရညျစူး သှယျတနျးလိုကျကွ သငျ့ပါသညျ။
စဈဖွဈပွီဆိုပါက နိုငျငံတှအေနဖွေငျ့ သဘာဝ ကကြပြငျ လူတှေ၊ စဈသညျတှေ နီးကပျစှာ စတငျ စုစညျးကွရမွဲ ဖွဈ၏။ လကေ့ငျြ့ရေးစခနျးတှေ၊ စဈဘကျအခွစေိုကျတပျတှေ၊ တပျစှဲ ရှလြေ့ားဧရိယာ တှေ၊ ပငျလယျထဲမှာသင်ျဘောတှေ…။ ဒါတှကေ ကပျရောဂါကာလအလယျခေါငျမှာ သငျမလုပျခငျြဆုံး အရာမြားပဲ ဖွဈပမေညျ။ ယခုလိုကာလမြိုးမှာ နိုငျငံ တှအေားလုံး ဝနျးရံပိတျဆို့ခံအနအေထားဆီ အလိုလို ကရြောကျနရေသညျမို့ ဘယျလိုအစိုးရပုံစံမြိုးမဆို အားလုံးအနဖွေငျ့ အစှမျးရှိသမြှ ပွညျသူလူထုကို ဤကပျရောဂါဘေးမှ ကာကှယျကွရမညျပဲဖွဈသလို နိုငျသရှေ့ လုပျနကွေခြိနျလညျး ဖွဈသညျ။ အခကျြ အလကျတှအေားလုံး အတူစုကွညျ့ပါက သညျလို အနအေထားမြိုးတှကွေောငျ့ပငျ မွငျရတာရှငျးလငျး သညျ။ ခေါငျးမာပွီးသနျစှမျးသူ၊ စဈပှဲဖနျတီးလေ့ ရှိတတျသူ ဆျောဒီ၏ မိုဟာမကျဘငျဆယျလျမနျလို လူစားမြိုးပငျလြှငျ ゞငျး၏ကွမျးတမျးလှပွီး မအောငျမွငျ သော ယီမငျစဈရေးကနျပိနျးမြားကို လြှော့ခရြေး ပိုစိတျဝငျတစား လုပျကိုငျလာနေ၏။
ပိုးဆနျ Posen က ကိုဗဈ ၁၉ သညျ နိုငျငံတကာ ကုနျသှယျရေးကိုလညျး ကာလတိုမှကာလလတျအထိ လြော့ကစြဖှေယျရှိသညျဟု ထပျဖွညျ့သညျ။ စီးပှား ရေးအပွနျအလှနျအမှီသဟဲပွုရခွငျးက စဈကို ပါဝါပွညျ့ ကွားခံပေးနိုငျမညျဟုလညျး သူကယုံကွညျထား၏။ ကုနျသှယျရေးပွနျဖှံ့ဖွိုးရနျ လိုအပျခကျြအား သတိ ပေးနနေိုငျသညျ၊ သို့ငွား သတိပွုရနျမှာ ကုနျသှယျရေး ကိစ်စသညျ လတျတလောနှဈမြား၌ တောကျလြှောကျ ရှုပျထှေးနပွေီး အထူးသဖွငျ့ ယူအကျဈနှငျ့ တရုတျကွား ဖွဈနသေညျကိုတော့ ထညျ့စဉျးစားကွရမညျဟုလညျး ထောကျပွပါ၏။ အပွုရခြေိနျတဈရပျဆီရောကျ အောငျ ထပျထပျညှိခွငျးကသာ တငျးမာမှုတှကေို လြှော့ခပြေး နိုငျမညျဖွဈပွီး စဈဆီဦးတညျနပွေီဆိုသော အသံပလံ ရငျးမွဈတှကေိုလညျး လြော့နညျးတိတျဆိတျစလေိမျ့ မညျ။
ဤကွောငျးကြိုးမြားအရဆိုလြှငျ ကပျရောဂါ သညျ သူ့နဂိုနအေရ ငွိမျးခမျြးရေးဆီ သှယျတနျးရှေ့ သှားနိုငျဖှယျ ရှိနသေညျ။ သို့သျော… ပိုကယျြပွနျ့လာ နသေော စီးပှားရေးအနအေထားမြားနှငျ့ စဈနှငျ့ သဏ်ဌာနျတူ နီးကပျလာခွငျးတို့အကွားမှ အဆကျအစပျ က ဘာတှပေါလဲ…။ အနညျးငယျမြှသော နိုငျငံခေါငျး ဆောငျတခြို့တလကေတော့ အကပျြအတညျးကို နှိုးဆျောပွီး စဈဆီသှားနခွေငျးကပငျ ရရှေညျ အမြိုး သား အကြိုးစီးပှား၊ သို့မဟုတျ ゞငျးတို့၏ကိုယျပိုငျ နိုငျငံရေးကံကွမ်မာကို အားသာခကျြရရှိနစေသေညျ ဟု ယုံကွညျမှုပွငျးပနြဆေဲ ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျပါ သလား…။ ဤကနေ ဆငျ့ပှားပွီး နကျရှိုငျးရှညျကွာ စီးပှားအကတြဈရပျက ဂလိုဘယျပဋိပက်ခကို ပိုအတညျ ဖွဈပျေါလာနိုငျခွမြေားနသေလား…။
ရငျးနှီးကြှမျးဝငျကွပွီးသား စဈသီအိုရီတဈရပျ ရှိပါသညျ။ ]မတူကှဲပွားမြားမွောငျမှု}ကို ကိုငျတှယျပုံ ဟု ချေါကွသညျ့ (သို့မဟုတျ ]တဈပါးသူအပွဈအတှကျ ဒဏျသငျ့ခံရသူ သီအိုရီ၊ Scapegoat Theory ဟုလညျး ဆိုကွသညျ) သဘောတရားကို ပွဆိုဖှငျ့ဆိုခွငျးဖွဈ၏။ ပွောရလြှငျ ]ဓားစာခံရှာ စဈပွုခွငျး}ပငျဖွဈသညျ။ ပွညျတှငျးမှာ လူ ကွိုကျနညျးလာမှုကို စိတျပူလာ သောကရောကျလာသော ခေါငျးဆောငျတခြို့အနဖွေငျ့ သူတို့၏ပကျြယှငျးခြို့တဲ့မှုမြားကို ဖုံးကှယျရနျ လူထုကို တခွားအာရုံပွောငျးသှားစဖေို့ ကွိုးစားလှုံ့ဆျောရနျ ပွညျပပါဝါတဈရပျရပျ၊ သို့မဟုတျ တဈနိုငျငံငံဆီ ဆနျ့ကငျြစဈပွုနိုငျရေးမြိုး အားထုတျပွုလုပျခွငျး ဖွဈသညျ။ ဤလောဂဈြမှကွညျ့ဖွငျယူပါက ယခု အမေ ရိကနျတခြို့ စတငျပူပနျလာနကွေသော စဈပှဲဆီမြား လားဆိုသညျကို တှရှေိ့လာနရေပါ၏။ သမ်မတ ဒျေါနယျ ထရမျ့အနဖွေငျ့ ရှေးကောကျပှဲမှာ သူရှုံးနိုငျခွကေို ကာထရေနျ အီရနျ သို့မဟုတျ ဗငျနီဇှဲလားကို စဈဝငျ တိုကျရနျကွိုးစားမညျလားဟု စိုးရိမျလာနကွေခွငျး ဖွဈသညျ။
မနှဈမွို့သျောလညျး ဤလိုထှကျရှိခကျြကိုကပငျ လူကို အတျောရိုကျခတျစပေါ၏။ သီအိုရီကတော့ တဈစုံတဈယောကျကသာ ယုတ်တိနှငျ့ လကျတှေ့ စီးဆငျးတတျပုံတှကေို ဥပက်ခာပွုမညျဆိုပါက စဈဖွဈ ပျေါကွောငျး ပွသထားသညျပငျ။ စဈဆိုသညျက အလောငျးအစားဆနျလှသညျ။ သေးငယျသညျဆိုလြှငျ တောငျ ကိစ်စခွငျးရာတှကေို ပိုဆိုးစေ ကုနျတတျမွဲ ဖွဈ၏။ ဒါက ထရမျ့၏ ကံကွမ်မာခေါငျးတလားကို ရိုကျပိတျမညျ့ နောကျဆုံးသံခကျြပငျ ဖွဈသှားစပေေ မညျ။ တဈဖနျထပျကွညျ့ကွရလြှငျတော့ ထရမျ့အနေ ဖွငျ့ လကျရှိအမရေိကလုံခွုံရေးကို ခွိမျးခွောကျနေ သောနိုငျငံဟု ထငျလောကျဖှယျ တဈနိုငျငံမှမရှိ။ သို့ငွား ပွညျတှငျးမှာတော့ ကာကှယျပေးနိုငျပါလကျြ အမရေိကနျ ထောငျပေါငျးမြားစှာ (ကပျရောဂါကွောငျ့) သဆေုံးနေ ခြိနျတှငျ အီရနျနှငျ့ ဗငျနီဇှဲလားကိစ်စမှာ အခြိနျနှငျ့ငှတှေေ ဘာကွောငျ့ ထရမျ့အလဟဿ အကုနျကခြံနသေညျလဲ ဆိုခွငျးအပျေါ သူ့ကိုသှေးတိတျအောငျ ဆကျထောကျခံ ပေးနသေူတို့ကိုယျတိုငျတောငျမှ ဝဝေါးနကွေရပွနျ၏။ အောငျမွငျသော စဈရေးတုံ့ပွနျမှုဆိုလြှငျတောငျ အမရေိကကို ပွနျအလုပျဖွဈစမေညျမဟုတျပေ။ ကမ်ဘာ အနှံ့က ကြှမျးကငျြလိမ်မာသောအစိုးရတှေ တာဝနျခံယူ ဆောငျရှကျနနှေငျ့ကွသညျ့ (ရောဂါကို) စဈဆေး-ရှာဖှေ ထိရောကျစှာပိုလုပျခွငျးကသာ အဆငျပိုပွေ သညျ။ သို့မဟုတျ ကာကှယျဆေးဘကျပိုလုပျ…။ သညျ ယုတ်တိတူကသာ အခွားကမ်ဘာ့ခေါငျးဆောငျမြား၏ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေိုလညျး လမျးညှနျပွပေးနပေုံပငျ။
နောကျထပျရငျးနှီးကွပွီးသားသီအိုရီက ]စဈရေး ဆိုငျရာကိနျးဝါဒစနဈ}ဖွဈသညျ။ စဈပှဲက စီးပှား ရေးတောငျးဆိုခကျြ အမြားအပွားထှကျပျေါစသေညျ။ တဈခါတဈရံ စီးပှားကနြိုငျငံတှကေို ထိုငျးမှိုငျးအနေ အထားကနတေောငျ လှတျမွောကျထှကျစပွေီွးှကယျဝမှုနှငျ့ အလုပျအကိုငျမြားပွားတိုးတကျရရှိမှုဆီ ဦးလှညျ့သှားစတေတျပွနျသညျ။ ထငျရှားလှသော ထောကျပွစရာဥပမာက ဒုတိယကမ်ဘာစဈဖွဈပွီး အမရေိကစီးပှားရေးကို မဟာစီးပှားပကျြအကထြဲမှ ခပျမွနျမွနျ ဆှဲထုတျပေးခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ ဤရှုထောငျ့ မှကွညျ့လြှငျ ဂရိတျပါဝါတှအေနနှေငျ့ စဈပှဲဆီသှားခွငျး က လုပျငနျးကွီးတှေ (စဈလကျနကျထုတျလုပျရေး ကဲ့သို့)ကို အခွခေံကကြ မွှငျ့ထိနျးခွငျး ဖွဈနစေေ နိုငျသညျဟု ယုံကွညျသူလညျးရှိပမေညျ။ စီးပှားရေး အပျေါ စိတျမသကျမသာဖွဈလာသော အစိုးရတှေ အနနှေငျ့ အသဈပွနျစဖို့ တဈစိတျတဈပိုငျးအားဖွငျ့ စဈပှဲဆီစှနျ့စားလိုကျမလား သောကပှားဖှယျလညျး ဖွဈသညျ။
သံသယရှိပါသညျ။ တကယျ့စဈတဈခုက အရေး ပါသော လှုံ့ဆျောမှုတဈရပျကို မွှငျ့ပေး၏၊ သို့ငွား ဘယျနိုငျငံကမဆို အဘကျဘကျက စှနျ့စားရမညျ့ ရှိနခေကျြအားလုံးအရ ကယျြပွနျ့သော စဈပှဲတဈရပျ စတငျနိုငျ၏ ဆိုသညျကတော့ ထိုနိုငျငံွှေကးမွီ သိပျထူ နခြေိနျဆိုလြှငျတောငျ ပုံဖျောစဉျးစားရခကျခဲပါသညျ။ ပိုအရေးကွီးသညျက စီးပှားရေးလှုံ့ဆျောရနျ ပိုလှယျ ကူပွီး တိုကျရိုကျပိုကသြညျ့ အခွားနညျးလမျးမြားစှာ ရှိနခွေငျးပငျဖွဈသညျ။ အခွခေံအဆောကျအအုံတှေ မှာ ငှပေိုသုံး၊ အလုပျလကျမဲ့အာမခံ… စသညျတို့လို အပွငျ ]ရဟတျယာဉျပေးခမြှေုမြား}ကဲ့သို့ ငှပေိုစီးဆငျး လှညျ့ပတျစမှေုတှေ လုပျနိုငျပါ၏။ စဈကွညောခွငျး ဆိုသညျက စီးပှားရေးကို လှုံ့ဆျောဖို့လုပျနိုငျတာတှေ ထဲမှာ ထိရောကျသခြောမှု အနညျးဆုံးနညျးလမျးပဲ ဖွဈပါ၏။ စဈပှဲခွိမျးခွောကျမှုက နိုငျငံရေးသမားတှေ စတော့ဈေးကှကျကို မကျြစောငျးထိုးလာတာ ပိုမြား စသေောကွောငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူမြားကိုလညျး ကောလာ ဟလတှနှေငျ့ သောကပှတေတျစသေညျ။
စီးပှားအကအြလှညျ့မြားက တခြို့သော အထူး သီးသနျ့ခွနေခြေိနျခါမြားတှငျတော့ စဈဖွဈစရေနျ အားပေးအားမွှောကျလုပျတတျပါ၏။ နိုငျငံတဈနိုငျငံ အနဖွေငျ့ ခကျခဲကွမျးရှမှုတှမြေားနပွေီး အရေးပါသော တနျဖိုးတဈစုံတဈရာကို ပွနျဖမျးယူဖို့ လိုအပျလာနပွေီ ဟု ယူဆလာရခြိနျမြိုးတှမှော ဖွဈသညျ။ ဤမိုဒယျတှငျ ၁၉၉၀ ကူဝိတျကိုဝငျသိမျးဖို့ ဆကျဒမျဟူစိနျ၏ဆုံးဖွတျ ခကျြမြိုးက အတျောပွညျ့စုံသညျ့ နမူနာပွယုဂျဖွဈသညျ။ အီရနျနှငျ့ ကာလရှညျစဈပှဲအပွီး အီရတျ၏စီးပှားရေး က ကွောကျလနျ့စရာကဆြငျးနေ၏။ အလုပျလကျမဲ့ ပွဿနာက ဆကျဒမျကိုခွိမျးခွောကျနသေလို ကူဝိတျ ၏ ရနွှေံကယျဝမှုကွီးက ဆုလာဘျအဖွဈ မကျြစောငျး ထိုးစိတျကူးယဉျစရာဖွဈနသေညျ။ စျောဘှားနိုငျငံလေး ကို လကျနကျဖွငျ့ဝငျသိမျးဖို့ကလညျး သိပျခကျမညျ မဟုတျပွနျ။ နောကျတဈခကျြက ကူဝိတျကို ဆပျစရာ အွှကေး အမြားအပွားတငျနခွေငျးပငျ။ ဘဂ်ဂဒကျက ပုဂ်ဂိုလျသညျ ညတှငျးခငျြးစာတဈအုပျဖတျသကဲ့သို့ွှေကးမွီမြားလညျးမဆပျရတော့အောငျ ကွံပါတော့ သညျ။ အန်တရာယျတောထဲကနြသေော အီရတျ၏စီးပှားရေးအနအေထားက စဈဖွဈစခေဲ့သညျဟု ပွောလို့လညျး ရပါသညျ။
ယနဘေ့ယျနိုငျငံ ဤလို အနအေထားရောကျနေ သလဲဆိုသညျကိုတော့ စဉျးစား၍မရသေးပါ။ ရုရှားက ယူကရိနျးကို ပိုဦးတညျ လိုခငျြလာနသေညျလား၊ တရုတျက ထိုငျဝမျကို စီးပှားအကြိုးပိုဖွဈထှနျးကွစေ မညျ့အရေး ရညျမှနျးခကျြပွ မကျြစပဈ သိမျးသှငျးနေ သညျလား… ယတိပွတျပွောနိုငျကွဖို့တော့ ခကျခဲပါ ၏။ သို့ဆိုလြှငျ ထရမျ့ အရိပျအခွညျပွပွောဖူးသော ရနွှေံကယျဝ တဈနိုငျငံငံကို (တလှဲလောဘဖွငျ့) အောငျနိုငျခွငျးဆိုသညျကလညျး ဆှဲဆောငျမှုမရှိလှပါ။ ဈေးကှကျမှာ ငမျးငမျးတကျနခြေိနျမဟုတျ၍ဖွဈသညျ။ ပူပငျစရာရှိသညျက အငျအားနညျးပွီး အကာအကှယျ မဲ့သော နိုငျငံငယျတခြို့ဖွဈသညျ။ ကပျရောဂါကာကှယျ ဆေးထှကျပျေါလာလြှငျ ပိုငျဆိုငျမညျ့၊ စတော့ဈေးကှကျ မှာ တနျဖိုးမွငျ့သှားမညျ့၊ နိုငျငံငယျလေးတှအေရေး ဖွဈသညျ။ သို့သျောလညျး ဤရှုမွငျခကျြသညျလညျး ဝေးကှာလှပွီး မဖွဈနိုငျဟုပငျဆို၍ ရပွနျသညျ။
ရရှေညျအမွငျအရတော့ စီးပှားအကြ ဆကျကွာ နမေညျဆိုပါက စဈဆီရောကျသှားဖို့ရှိပါသညျ။ ဖကျဆဈ (သို့မဟုတျ) နိုငျငံခွားသားမုနျးတီးရေး နိုငျငံရေးလှုပျရှားမှုမြား၊ ကိုယျကြိုးကာကှယျရေးဝါဒ နှငျ့ လှနျကဲအမြိုးသားရေးဝါဒကို ဆီလောငျးအားဖွညျ့ ခွငျးတို့လို လုပျရပျမြိုးတှကွေောငျ့ စဈဖွဈရနျ ပိုနီးကပျ မညျ။ ဒါတှကေ တဈနိုငျငံနှငျ့တဈနိုငျငံလကျ ခံလောကျ ဖှယျ ညှိနှိုငျးသဘောတူညီမှုတှေ ရနိုငျဖို့ အမြားကွီး ပိုခကျခဲစမေညျ့ ကိစ်စမြားပငျဖွဈသညျ။ ၁၉၃၀ ပွညျ့ လှနျနှဈမြား၏သမိုငျးက စီးပှားရေးအကြ သကျရောကျ ခကျြမြားကွောငျ့ ကမ်ဘာ့နိုငျငံရေးတဈလမျးမောငျး လမျးသဖွေဈကုနျစခွေငျးကာလကို ထငျရှားပွဆို၏။ ဦးဆောငျသှားသညျက စဈဆီသာဖွဈသညျ။ အမြိုး သားရေးဝါဒ၊ နိုငျငံခွားသားမုနျးတီးရေးနှငျ့ အသျော ရဈတေးရီးယနျးအုပျခြုပျပုံတို့က ကိုဗဈ ၁၉ မတိုငျ ခငျကလို ゞငျးတို့တဈလှညျ့ ပိုအားကောငျးပွနျရောကျ လာနိုငျအောငျလုပျနသေညျ။ သို့ငွား ယခု ကမ်ဘာ့ထောငျ့ တိုငျးမှာ ပျေါပေါကျနသေော စီးပှားရေးဒုက်ခက ဤကိစ်စတှကေိုပို လမျးကွောငျးရှငျးပေးနိုငျနသေညျ သာမက ဗိုငျးရပျဈအပျေါအကွောကျတရား လြော့ကြ လာကွခြိနျတှငျ စဈပှဲအောကျ ကုနျးမှောကျနကွေရမညျ့ အနအေထားဆီ ပိုရောကျစနေိုငျနပွေနျသညျ။
မြှခွညေီအပျေါမှ သခြောစဉျးစားလြှငျတော့ စီးပှားရေးအခွအေနတှေေ ပုံမှနျမဟုတျဆိုငွား ယနေ့ မကျြမွငျ သကျသပွေုပွနသေော သကျရောကျမှု မြားစှာ အရ စဈဖွဈမညျဟု သိပျမမွငျမထငျပါ။ ဘာကွောငျ့ ပါလဲ….။
ပထမအခကျြ။ ။ ဒီပရကျရှငျက စဈဖွဈစဖေို့ အားကွီးသော အကွောငျးရငျးတဈရပျဖွဈ(ခဲ့)လြှငျ တောငျ ဒါကို ကြျောလှနျသှားနိုငျဖို့ကပိုမြားပါ၏။ ဥပမာတဈခုပွောမညျ။ နိုငျငံစထူထောငျစဉျ ကနဆေိုပါက ယူအကျဈသညျ ရီဆကျရှငျပေါငျး အကွိမျ ၄၀ ကြျော နှငျ့ နိုငျငံခငျြးဖွဈစဈပှဲအကွိမျ ၂၀ အနညျး ဆုံး ခံစား၊ ဖွဈပှားခဲ့ရသညျ။ ထိုစဈအမြားစုမှာ တိုငျး ပွညျစီးပှားရေးနှငျ့ မပတျသကျ၊ မဆကျစပျပါ။ ရီဆကျ ရှငျတှကေသာ စဈဖွဈစဖေို့အားကွီးသော အကွောငျး ရငျးတဈရပျဆိုပါလြှငျ ဘောဂဗဒေပညာရှငျ ပေါလျဆငျ မွူရယျဆငျ၏ စတော့ဈေးကှကျကို သောထသေ့ော စကားရပျသုံး ဟောကိနျးထုတျကွရပမေညျ။ ] နောကျ ဆုံး ၅ ကွိမျနဲ့ ၅ ကွိမျအောကျမှာတငျ (စဈ) ၉ ခါလောကျဖွဈပွီးပွီ}…။
ဒုတိယအခကျြ ။ ။ တိုငျးပွညျတှအေနဖွေငျ့ ခပျမွနျမွနျအောငျနိုငျမညျ၊ ဆကျစပျကုနျကစြရိတျလညျး သကျသာမညျဟု မယုံကွညျလြှငျ စဈပှဲတဈရပျ စတငျ မတိုကျပါ။ ဂြှနျမီးယားရှိုငျးမား ( John Mearshimer ) က သူ့ ဂန်ထဝငျစာအုပျ Conventional Deterrence မှာ ယခုလို ရေးသားဖျောပွထား၏။ အမြိုးသား ခေါငျးဆောငျမြားက ကာလကွာမညျ၊ သှေးမွကေမြား မညျ၊ စရိတျစကကွီးမညျ၊ မသခြောမရရော ဟု မွငျပါ က စဈမတိုကျ။ စဈကိုရှေးခယျြကွဖို့ရာတှငျ နိုငျငံရေး ခေါငျးဆောငျမြားကတော့ သူတို့ကိုယျတိုငျ ယုံကွညျ စိတျရှိရေးက အရငျကြ၏။ ခပျမွနျမွနျ၊ ဈေးသကျသကျ သာသာ နိုငျရမညျ၊ တိတိပပအောငျနိုငျရမညျ၊ သို့ မဟုတျ သီးခွားသတျမှတျရညျမှနျးခကျြတခြို့ကို စရိတျ စကအကုနျ အကနြညျးနညျးဖွငျ့ အောငျမွငျနိုငျရမညျ။ ၁၉၁၄ ဥရောပမှာ စဈဖွဈခဲ့ရာ၌ နှဈဖကျလုံးက မွနျမွနျ နှငျ့သကျတောငျ့သကျသာအနိုငျရမညျဟု ယုံကွညျ ခဲ့ကွ၏။ နာဇီဂြာမနီသညျ ゞငျး၏ရနျသူမြားကို တတျ နိုငျသလောကျ ခပျမွနျမွနျနှငျ့ အကုနျအကနြညျးနညျး၊ အကအြဆုံးနညျးနညျးဖွငျ့ အနိုငျယူရေး ဘလဈဇျ ခရိုငျးဂျ မဟာဗြူဟာကို ခမြှတျတှဲဆကျကငျြ့သုံးခဲ့၏။ အီရနျကို ၁၉၈၀ အီရတျဝငျတိုကျခဲ့သညျမှာ အစ်စလာမ်မဈ သမ်မတနိုငျငံအီရနျ ဖရိုဖရဲဖွဈနပွေီး ခပျလှယျလှယျ အနိုငျရမညျ ဟု ဆကျဒမျ ယုံကွညျသောကွောငျ့ပငျ။ အီရတျကို ၂၀ဝ၃ စဈပွုဝငျတိုကျခဲ့ရာ၌လညျး ဂြော့ ဒဗယျလြူဘုရျှအနဖွေငျ့ စဈကို တိုတောငျးမညျ၊ အောငျ မွငျမညျ၊ ကုနျကစြရိတျက အီရတျစရိတျဖွငျ့သာ ငါးကွငျးဆီဖွငျ့ ငါးကွငျးကွျောနိုငျသညျဟု ယုံကွညျမှု ကွောငျ့သာ ဖွဈ၏။
ဤတှရှေိ့ရခကျြက ထိုခေါငျးဆောငျတို့သညျ ဆိုးရှားစှာတှကျခကျြမှုလှဲခြျောစခေဲ့စမေူ အဓိက ဆုံမှတျပှိုငျ့ကို မွငျနရေသညျကတော့ နိုငျငံစီးပှားရေး အနအေထားအပျေါ မထညျ့သှငျးမတှကျခကျြမှု ဖွဈ သညျ။ ထိုခေါငျးဆောငျတို့သာ ခပျမွနျမွနျ၊ စရိတျ ကဉျြးကဉျြး၊ သငျ့လြျောသောအောငျမွငျနိုငျခွကေို လှယျလှယျရမညျ… စသောအခကျြမြားကို အဓိကထုား မစဉျးစားမိခဲ့ပါက စဈပငျဖွဈခဲ့မညျမဟုတျပေ။
တတိယအခကျြ ။ ။ အရေးအကွီးဆုံးအခကျြ လညျး ဖွဈသညျ။ စဈပှဲအမြားစု၏ အခွခေံတှနျးအား ကကြ ပိုငျးဖွတျဆန်ဒမှာ စီးပှားရေးအသာစံရလိုမှု မဟုတျ၊ လုံခွုံရေးသာ ဖွဈပါသညျ။ ဤကွောငျးကြိုး ပွခကျြအရ နိုငျငံမြား အနဖွေငျ့… ရရှေညျပါဝါမြှခွေ ရှသှေ့ားပွီး ဆနျ့ကငျြဘကျဆောငျလာမညျ၊ ရနျဘကျ မြားကို ဘယျလိုမှဆီလြျော သငျ့တျော ညှိနှိုငျး၍ မရ တော့ဘဲ အန်တရာယျအသှငျဆောငျလာပွီ၊ ယခုဝငျ ရောကျ လှုပျရှားလိုကျပါက အခွအေနဆေိုးမြားကို ပွောငျးပွနျလှညျ့လိုကျနိုငျပွီး အနအေထားတှကေို တညျငွိမျလုံခွုံမှုရစနေိုငျမညျ… ဟူ၍ ゞငျးတို့ကိုယျတိုငျ ယုံကွညျနစေလောခြိနျမြိုးမြားတှငျ စဈပှဲအသံဗလံမြား မွငျ့တကျလာမညျ ဖွဈလသေညျ။ သမိုငျးပညာရှငျ အဂေပြေီတလော (A. J. P. Taylor) တှရှေိ့ထုတျဖျော ထားခကျြရှိ၏၊ ]… ဂရိတျပါဝါမြားကွားမှ (၁၈၄၈ – ၁၉၁၈ အတှငျး) စဈပှဲတိုငျးသညျ ခုခံစဈအဖွဈသာ စတငျခဲ့သညျ၊ ကြူးကြျောစဈမဟုတျပေ…}၊ ဤအခကျြ သညျ ထိုအခြိနျကာလမြားကတညျးက စဈပှဲအမြားစု အတှကျ ယခုထိ မှနျကနျထငျကနျြနသေေးပါ၏ ။
အောကျခွမေဉျြး ။ ။ စီးပှားရေးအနအေထား (ဒီပရကျရှငျ အကတြဈရပျ) က စဈနှငျ့ငွိမျးခမျြးရေး ရှေးခယျြဆုံးဖွတျမှုမြားအတှငျး ပိုကယျြပွနျ့သော နိုငျငံရေးရပျဝနျးဖွဈလာရနျ သကျရောကျနိုငျခွေ ရှိပါ သညျ။ သို့ငွား အရေးအပါဆုံး သောအခကျြမဟုတျပေ။ အခကျြမြားစှာထဲမှ ရှားပါးတဈခကျြသာဖွဈ၏။ ကိုဗဈ ၁၉ က ကမ်ဘာ့စီးပှားရေးကို ထိခိုကျနဈနာ အနှုတျ ဆောငျစအေောငျ ဆကျကယျြပွနျ့ကွီးထှားတညျရှိ နသေညျဆိုလြှငျတောငျ (ကမ်ဘာ့စီးပှားရေးကတော့ ထိခိုကျနတောမွငျနရေပွီးဖွဈ၏) စဈဖွဈပှားနိုငျခွေ အတှကျ အလှနျအမငျးကွီး မသကျရောကျစနေိုငျပါ၊ အထူးသဖွငျ့ လောလောဆယျ ကာလတိုတှငျ ပိုမသကျ ရောကျနိုငျပါ။
ဒါကို သခြောစဖေို့ဆိုရာတှငျတော့ စဈ၏နောကျ ထပျအားကွီးသောအကွောငျးရငျးတဈရပျကို ပွောရပါ ဦးမညျ၊ ထိနျးခြုပျအုပျခြုပျ၍မရနိုငျသော မိုကျမဲ ရူးသှပျမှု…။ အထူးအားဖွငျ့ ယနေ့ သုံးလပတျကာလ မြားမှာ လကျတှသေ့ကျသပွေဖွဈပျေါနမှေုတခြို့။ တလှဲလမျးညှနျခေါငျးဆောငျမြားက နောကျထပျ သှေးမွကေစြမှေုကွီးတှေ ဖွဈပျေါစမေလား၊ မွငျတှေ့ ဖွဈပျေါလာမညျမဟုတျဟု ယတိပွတျပွောနိုငျမလား၊ ထိုထိုတှအေတှကျကတော့ မညျသူကမြှအာမခံနိုငျ မညျမဟုတျပါ။ သမိုငျးမှာ သီးသနျ့ကာလမြိုးတှေ၌ နခွေညျဖနျြးပကျ ရောငျစဉျလကျမှုကို ရှာဖှကွေရတာ တော့ ခကျခဲတတျမွဲဖွဈသညျ။ ကြှနျုပျကတော့ စဈဖွဈ မညျမဟုတျ ဟူသောအမွငျသာ မှနျကနျသညျဟု မြှျော လငျ့ ယုံကွညျသှားနမေညျဖွဈသညျ။
(မူရငျးဆောငျးပါးရှငျ စတီဖငျ အမျ ဝေါ့လျထျ Stephen M. Walt သညျ ဟားဗတျတက်ကသိုလျ၊ နိုငျငံ တကာဆကျဆံရေးဌာန၏ the Robert and Renee Belfer ပါမောက်ခ ဖွဈသညျ။)